Apple malitere iku ụlọ ọrụ ọhụrụ maka Campus 2 | Esi m mac
Apple na-amalite iku maka ogige ọhụrụ 2
Usen ke usen ke usen, ke ọfiọn̄ ke usen ke usen, anyị na-eso usoro Apple Campus 2 ekele dị iche iche vidiyo mere drones na mpaghara, nke ha kwere anyị mara mmalite nke ihe ga-abụ isi ụlọ ọrụ ọhụrụ site na ụlọ ọrụ Cupertino.
O doro anya, oghere nke ụlọ ọrụ ọhụrụ ndị a na-abịarukwu nso (ọ nwere ike ịmalite iji ya na Jenụwarị 2017). N'ihi ya, Apple amalitela imeghe ohere na ebe nrụọrụ weebụ ya na LinkedIn iku ndi oru ozo ma nabata ha na ebe ohuru.
Ruo ugbu a, emeela ụlọ ọrụ ọhụrụ maka Campus 2 site na ụlọ ọrụ na-adịru nwa oge yana site na ndị ọzọ. Ma ugbu a, Apple na-agụnye ọkwá na-adịgide adịgide na weebụsaịtị ya ịmalite ịmalite isi ụlọ ọrụ ọhụrụ na Cupertino.
O yiri ka ọfịs ọhụrụ ahụ ga-enwe ike ịnabata ihe ruru ndị ọrụ 41.000. Ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ọnụọgụ ndị ọrụ bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ North America taa.
Atụmatụ kachasị nwee ọchịchọ ịchọta emecha ọrụ na akụrụngwa ahụ site na njedebe nke afọ. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ Apple nwere ike ịkwaga na Campus 2 ọhụrụ na Jenụwarị. Na ngụkọta, ihe karịrị mmadụ 12.600 na-arụ ọrụ ahụ, yana ihe ruru ihe ruru 2 nde nwere ụzọ ọ bụla, ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi.
Ihe ịma aka maka injinịa isi ụlọ ọrụ Apple ọhụrụ a, nke malitere iwu na February 2014. N'ezie, ọrụ ahụ bụ nke onye ọhụụ Steve Jobs, onye gosiputara oru a na Cupertino City Council dika mbido 2006.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-amalite iku maka ogige ọhụrụ 2
Ana m akwụ ụgwọ ndapụta maka MacBook Pro, Apple engineer ọchị, mbata nke Trump na ọtụtụ ndị ọzọ. Kachasị mma izu na SoydeMac
Ngwa 3 maka ịrụ ọrụ nke ọma na ọrụ gị